China Digital Camera Case mpanamboatra sy mpamatsy | DOWODA
Fitaratra vita amin'ny fantsom-baravarana vita amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana ...
Auto faritra ravin vy vy fanodinana takelaka taratasy m ...
cnc cnc lathe fanodinana metaly tsy vita amin'ny metaly ...
Famolavolana gong solosaina goavambe goavambe ...
Fanodinana aliminioma alimina vita amin'ny alimina aluminium ...
Fitaovana vy amin'ny takelaka
Tranga fakan-tsary niomerika
anaran'ny vokatra Raharaha fakan-tsary niomerika firaka aliminioma karazana vokatra Sokajy niomerika
Fomba fanodinana Fanodinana manokana Karazana fanodinana Masinina fanodinana CNC
Kitapo manaporofo 3-7 andro fametrahana mazava tsara famaranana
Kitapo fanodinana 10-15 andro Ny savaivony farany ambony 500mm
Fahasarotan'ny velarana 0,2 Ny halavany farany ambony 1500mm
Fitsaboana ambonin'ny tany Oxidation Fandeferana ny vokatra 0.01mm
Fitaovana fanodinana aluminium
Fampiasana vokatra Fitaovana fakantsary nomerika
Ny milina fanodinana CNC dia antsoina koa hoe milina fanodinana cnc, ary ny mampiavaka azy lehibe indrindra dia:
1.Parts dia tena azo ovaina sy azo ovaina, ary afaka manamboatra faritra misy endrika endriny sarotra na sarotra fehezina, toy ny faritra bobongolo, faritra moka, sns.
2.It dia afaka manodina ampahany izay tsy zakain'ny fitaovan'ny milina tsotra na sarotra ny manodina azy, toy ny ampahany sarotra miolikolika nofaritan'ny modely matematika sy ny faritra mihodinkodina habakabaka 3D;
3. Afaka manamboatra ampahany marobe I-aorian'ny fametahana sy fametrahana toerana iray;
4. Ny fikirakirana avo lenta, ny kalitaon'ny fikirakirana azo antoka sy azo antoka, ny pulsa mitovy amin'ny fitaovana fanaraha-maso isa dia amin'ny ankapobeny 0,001mm, ary ny rafitra fanaraha-maso isa marimarina dia mety hahatratra 0.1μm.
Ho fanampin'izany, ny milina CNC dia misoroka ny hadisoan'ny mpandraharaha;
5. Ny ambaratonga avo lenta amin'ny famokarana mandeha ho azy dia afaka mampihena ny hamafin'ny asa ataon'ny mpandraharaha. Mahatonga ny fitantanana automatisation fitantanana;
6. Fahombiazan'ny famokarana avo lenta, ny milina fanodinana CNC amin'ny ankapobeny dia tsy mila mampiasa fitaovana fanodinana manokana toy ny fametahana manokana, ary mila miantso fotsiny ireo programa momba ny milina, fitaovana fampidirana ary angona tahiry napetraka ao amin'ny fitaovana CNC rehefa manova ireo sanganasa, izay mampihena be ny famokarana . tsingerin'ny. Ny milina fanodinana CNC dia manana asan'ny milina fikosoham-bary, milina mankaleo ary milina fandavahana, izay mifantoka be amin'ny laoniny sy manatsara be ny famokarana. Ankoatr'izay, ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandehan'ny milina fanodinana CNC dia miovaova tsy miova, noho izany dia mahasoa ny misafidy ny habetsaky ny fanapahana tsara indrindra;
Ka ahoana ny fikajiana ny hafainganam-pandehan'ny milina famaranana mandritra ny fizotran'ny famolavolana ny masinina fanodinana CNC? Hongweisheng Precision Technology dia hizara aminao:
1. Fantaro ny boriborin'ny fandavahana. Azonao atao izany amin'ny fomba roa. Voalohany, azonao atao ny mandrefy ny savaivon'ny vodin-trano farany ary avy eo zarao 2 mba hahazoana ilay radius. Ohatra, mizara 5 mm amin'ny roa _. Mamokatra radius misy metatra pen roa sy sasany. Na, aforeto ny fehezan-kasine manodidina ny teboka mba hahazoana ny perimeter ary avy eo zarao amin'ny habetsany
Amin'ny 2x PI (3.14). Ohatra, raha 12.56 milimetatra ny manodidina dia roa milimetatra ny metatra.
2. Ny singa misy ny hafainganam-pandehan'ny angotra voafaritra dia ny famaranana Hertz. Raha manana RPM hafainganam-pandeha ianao, dia zarao 60 mba hahazoana Hertz. Ohatra, 600RPM dia 10 Hz.
Previous: Exchanger firaka aliminioma
Manaraka: Fitaovana fifandraisana amin'ny firaka aliminioma
Cnc fanodinana manokana
Cnc faritra fanodinana Customization
Famokarana bitika kely Cnc
Machining miendrika endrika manokana Cnc
Machining Cnc lehibe
Aluminium prototype modely tanana manaporofo cnc proc ...
Fitaratra vita amin'ny fantsom-baravarana vita amin'ny alàlan'ny fitaratra miloko P ...
Fanodinana aliminioma alimina vita amin'ny alim-baravarankely alohan'ny ...
Fitaovana vy tsy misy fangarony fitaovana
Fittings vy tsy misy vy
Tontonana chassis aluminium
Fanodinana Cnc Machining Center, Cnc fanodinana birao tanana, Fitaovana milina, Fanodinana Cnc Precision Parts, Fanodinana Steel Cnc, 5 Axis Cnc Lathe,